माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्मअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गर्ने प्रतिवद्धता
Sat, Sep 22, 2018 | 07:44:18 NST
17:10 PM ( 11 months ago )
काठमाडौं, असोज २५ – सरकारले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्मअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
सात दिनदेखि अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीका माग बारे वार्ता गर्न गठिन सरकारी वार्ता टोलीले माथेमा कार्यदलको भावना अनुसार नै चिकित्सा विधेयक आउने भन्दै केसीलाई अनसन तोड्न आग्रह गरेको छ ।
केसीका अरु मागका बारेमा सरकारी वार्ता टोलीले आन्तरिक छलफल गरिरहेको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य किरण रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्नुपर्ने, काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफूखुसी तोकेको शुल्क सीमा फिर्ता हुनुपर्नेलगायत माग राख्दै केसी अनशनमा बस्नु भएको छ ।
गएको बिहिबारदेखि १३ औं पटक अनशन बसेका डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । केसीका माग बारे वार्ता गर्न सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नगेन्द्रप्रसाद उपाध्याय संयोजक र शिक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डिल्ली रिमाल र स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मी सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन भएको थियो । डाक्टर केसीका तर्फबाट डाक्टर वाइपी सिंह, डाक्टर जीवन क्षेत्री र डाक्टर अभिषेक सिंह सम्मिलित टोली गठन भएको छ ।
स्रोतका अनुसार संसदमा नेकपा एमालेले विधेयकमा विरोध नजनाए भोलि नै डा. केसीको माग बमोजिम विधेयक पास हुनेछ । तर एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले माथेमा कार्यदलका सबै बुँदा पालना गरेर विधेयक पारित गर्न नसकिने अडान राखेको श्रोतको दावी छ ।